केही दिन अगी एउटा ईमेल पाएँ, अमेरिका बासी एकजना आफ्नो जातिय राज्य र भाषाका लागि युद्धरत्त कथित विद्वानको उन्ले समर्थन र खुशी ब्यक्त गरेका थिए कि काठमान्डौ बन्द र तोडफोड को । मैले पुर्पुरोमा हात राखेर धिक्कारे उन्लाई ए भगवान यो कस्तो मानसिकता हाम्रो ? उन्ले जुन भाषा र राज्य को वकालत गरेका थिए त्यो बन्द मा क्षती भएका ९० % सबारी साधन का मालिक ति जाती कै थिए आफ्नै घरमा आगो लगाएर ताप्ने कस्तो सोच उन्को ? दु:खका साथ भन्नु पर्दछ हामीले हाम्रै कारणले नेपाल लाई यो दुराब्स्थामा पुर्‍याइ सक्यौ जात र भाषाका नाममा, एक अर्काका बिरुद्ध कहिले सम्म बिष बमन गरी राख्ने जब सम्म नेपाल र नेपाली भन्न नपाईने कानुन बन्दैन तब सम्म ?
मेरो जानकारीमा आए सम्म बहुसंख्यक नेपालीले बोल्ने राष्ट्र भाषा नेपालीले ( आरोपित खस भाषा ) अन्य अल्पसन्ख्यक भाषी लाई कानुनत कुनै बिरोधि काम गरेको छैन , तर आज अल्पसंख्यक भाषी वा जातीहरु नेपाली भाषा माथि जानी नजानी समाज र देश लाई बिखन्डन गर्ने गरी बिद्रोह मा उत्रिएको देखिएको छ । के बहुसंख्यक नेपाली भाषीले अहिले अल्पसन्ख्यक भाषी र जातीले गरे जस्तो बिद्रोह को अनुसरण गरे पारीणाम सुखद हुन्छ ? नेपाल र नेपाली भन्नमा गर्ब गर्ने कि बिद्रोह को खेती मात्रै ? अझ आफु लाई शिक्षितको कोटीमा राखेर बिदेशको सभ्य समाजको पवित्र रस चुसेर स्वदेशी समाजमा भने बिषमय बिचार ब्यक्त गर्नु कस्तो चिन्तन मनन को परिणाम् हो ?
तसर्थ अन्तमा मेरो आफ्नै उधाहरण दिदै सबिनय निबेदन र सुझाब गर्न चाहन्छु । ''मलाई नेपाल मा हिन्दी भाषा र सस्कृतीको प्रभाब आबस्यक भन्दा बढी हाबी भएकोले चिन्ता लागि हिन्दी टिभी च्यानल हटाइ दिएँ, हिन्दी सिनेमा हेर्दिन र भारतीय सित हिन्दी मा कुरा गर्दिन ''त्यसैले समाजमा बिभेद र द्वन्दको असमझदारिको खेती गर्नु भन्दा यदी नेपाली भाषाको बिरोध गर्नु छ भने इमान्दारी पूर्वक नेपाली नबोल, नेपाली नलेख, नेपाली नपढ, नेपाली टिभी नहेर र नेपाली सित नेपाली भाषा मा कुरा नै नगर आफुले जुन भाषाको लागि संघर्स गरेको हो त्यही भाषा र लिपी मा अडिग बस । संकीर्ण बिचार र सन्कुचित स्वार्थ को लागि देश माथि अन्याय नगरौ ।
म भूल हुँ सुधार्न सक्छौ
पुरानो गल्बन्दिको धागो हुँ
उधारेर नयाँ स्वरूप दिन सक्छौ ....,
कहाँ मैले भनेकी छु र ?
म सदाबहार छु भनेर
कहाँ मैले हठ गरेकी छु र ?
म सदा सर्वदा जायज छु भनेर ,
म फूल हुँ बास्ना लिन सक्छौ
म... पत्कर पनि हुँ
कुल्चेर हिँड्न पनि सक्छौ /
कहाँ म गर्वित छु र ?
केवल फूल्नुको अर्थमा,
कहाँ म रमेकी छु र ?
बास्ना छर्नुको औचित्यमा ........./
म शूल हुँ ,
पंछाएर हिँड्न पनि सक्छौ
म पुरानो घाउको खाटा हुँ
उप्काएर फाल्न पनि सक्छौ /
कहाँ मैले सोचेकि छु र ?
म कोमलताको प्रतीक मात्र हुँ भनेर
कहाँ म निश्चिन्त छु र ?
सधैं तिम्रो अभीष्ट्मा अटाउछु भनेर
समग्रमा मेरो ........
इेक्षा,आशा, हार्दिकता यही हो
म भूल हुँ ,
सुधार्न सक्छौ ,
म.......जे हुँ,जस्तो हुँ
नयाँ आकार दिन सक्छौ /